Mark Gurman Ayaa Yiri Fikirka Apple Ee AirPod Iyo HomePods Cusub | Waxaan ka socdaa mac
Mark Gurman wuxuu leeyahay Apple horay ayey uga shaqeynaysay AirPods cusub, AirPods Pro iyo HomePod
Apple waxay ka heshay miino dahab ah AirPods, waxayna durbaba ka fikireysaa inay dib u cusbooneysiiso, si ay u sii wadato inay soo sheegto faa'iidooyinka milyaneerka, shaki la'aan. Mark Gurman Wuxuu kaliya ku sharaxay maqaalkiisii ​​ugu dambeeyay ee lagu daabacay Bloomberg.
Apple wuxuu ku saxsanaa qaabeynta kii ugu horreeyay AirPods, oo mar kale ku sameeyay AirPods Pro, oo labanlaabay qiimaha kuwa hore. Waxaana laga iibiyaa malaayiin. Qalab yar oo hubaal ah inuu shirkadda u keenayo faa'iidooyin badan. xidid ay shirkaddu rabto inay sii wado ka faa'iideysiga, iyadoo lagu cusbooneysiinayo noocyo cusub sanadka 2021.
Sida Mark Gurman uu ku daabacay Bloomberg, Apple ayaa qorshaynaysa in ay cusboonaysiiso ay line of AirPods sanadka soo socda oo leh labo lagu daydo cusub oo ka mid ah AirPods-qarnigooda saddexaad iyo AirPods Pro jiilka labaad.
Wuxuu ku tilmaamay warbixintiisa in Cupertino ay ka shaqeynayaan laba nooc oo cusub- Jiil seddexaad oo ah AirPod-gelitaan iyo nooca labaad ee dhagaha dhagaha ee AirPods Pro, sida aad uga baratay shaqaalaha ka shaqeeya mashaariicdan.
Sida for jiil saddexaad oo ka mid ah AirPods, warbixintu waxay sheegaysaa inay dhaxli doonaan naqshad dibadeed oo la mid ah tan hadda jirta ee AirPods Pro, oo leh xidido gaaban iyo xoqista dhagaha oo la beddeli karo, laakiin aan dhawaaqa la joojin. Apple waxay raadineysaa inay hagaajiso nolosha batteriga ee AirPods cusub.
Wixii ah jiilka labaad Dhanka AirPods Pro, Apple waxay ujeedkeedu yahay inay sameyso dhagaha dhegaha mid aad ufiican iyadoo ka saareysa jirida gaaban ee hada hoosta ka soo baxeysa, waxaana la sheegay inay tijaabineyso nashqad qaabkeedu wareegsan yahay oo dhegta isticmaalaha dhegta ka buuxineysa, bal taas ayaa ka dhigi laheyd iyaga aad ula mid ah Samsung Galaxy Buds-ka hadda jira iyo kuwa kale oo naqshado la mid ah ka leh Amazon iyo Google.
HomePod cusub oo shaqadi ku jirta?
Apple sidoo kale waxay qorsheyneysaa nooc cusub oo ah HomePod Taasi waxay u dhaxeysaa HomePod-kii asalka ahaa iyo midka dhawaan la soo saaray ee HomePod mini, sida uu sheegay Gurman. Qalab noocan oo kale ah wuxuu ahaan lahaa cabir, qiimo iyo tayo cod oo udhaxeeya HomePod-kii hore iyo HomePod mini. Ma cadda in Apple aakhirka sii deyn doono badeecadaas ama ay hoos u dhigi doonto qiimaha nooca dhammaadka-dheer xitaa sii dheer. Waan arki doonaa markaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mark Gurman wuxuu leeyahay Apple horay ayey uga shaqeynaysay AirPods cusub, AirPods Pro iyo HomePod
Ka hel faylal kasta kombiyuutarkaaga ProFind
Taariikhda barnaamijka Apple TV Remote App: Saameyntiisa Remote Remote